Kudzoka kwaJonathan Davies kusimba kunowedzera tariro yeWales 'World Cup | 1xbet
-> Wales yaive naPrince Charles ari mukurovedza neChitatu. Ari muTokyo kugadzwa kwaPrince Naruhito, asi akamira paPrince Chichibu rugby stadium kuti ataure nekupa Owen Lane nekapu yake.
Sekureva kwaKen Owens, Charles anga asina rairo yekupa timu iyi semi fainari yeNdebe yeNyika asi yakapa chiitiko chimwe chete chakakosha paSpringboks. “Akangoti ‘vane ropa rakakura ma bugger, handiti?” Owens akati “ndokusiya ipapo.” Charles anga akapfeka bheji repabheseni kubva kuLlandovery RFC, futi.Ndiye mutariri ipapo uye, kana akaita mipiro yakadaro, anofanira kunge akanakawo. “Unogona kutaura kuti vanhu vake vakambovako uye vakamboongorora nzvimbo yacho.” Mapaki haana kutaura kana vanga vaona chero vatori vemifananidzo vane malenzi marefu akatarisa kunze kwemahwindo ari pedyo. Asi zvakadaro kusiyana neEngland, Wales haina kunetseka nezve chero mumwe munhu anoenda kunovhima.Kufanana nemurairidzi wavo wekurova, Neil Jenkins, akati: “Kune zvivakwa zvakawanda zvakapoteredza kana vanhu vachida kutitarisa tichidzidzisa, handina hanya zvakanyanya.” Tsvimbo yeSouth Africa inoshora ‘hupenzi’ hutsori uye inongwarira kukandwa kweWales Read more
Pakanga pasina zvakawanda zvekutorwa kubva pazviri, Jenkins akawedzera, kwete zvemutambo wakadai uyu. “Pane ongororo yakakwana inoenderera mberi, saka munonyatsoziva zviri kuuya. Panogona kunge paine hunyengeri huviri hunosimudza maoko avo, kana chimwe kana zviviri zvakasiyana zvinhu zvinouya Svondo, asi kazhinji zviri nyore chaizvo: iwe unoziva zviri kuuya asi unogona kuzvimisa? Uye ndozvichazoitika kwatiri neSouth Africa neSvondo. ”
Pane kamwe kapepa kadiki keruzivo maBhokobhoko nevamwe vese vangade kuziva uye ndosaka Jonathan Davies achakodzera kutanga pa pakati.Akaburitsa mukota-fainari vachirwisa France paminiti yekupedzisira nekuda kwekukuvara kwebvi. “Chaive chisarudzo chakaomarara kwaari kutora svondo radarika,” akadaro Parkes, uyo anotamba naDavies kuScarlets. “Iwe unoda kuenda kunze uko uye unotamba, saka unoti wakaita zvakanaka, asi kuti iye agone kutendeuka oti” kwete, ini handisi chaizvo “aive akanaka kwaari, anga achiisa timu pamberi . ” Facebook Twitter Pinterest Prince Charles anosangana nemurairidzi, Warren Gatland (kuruboshwe), uye kaputeni, Alun Wyn Jones, kukamba yekudzidzira yeWales muTokyo. Mufananidzo: David Davies / AP
Davies haasati adzoka mukudzidziswa kwakazara asi Jenkins ane chivimbo chekuti achakurumidza. “Anoratidzika zvakanaka.Ari kudzokera kwairi, saka ndinoda kufunga kuti achakwanira Svondo, ”akadaro Jenkins. “Ndiye mutambi anokosha kwatiri, munhu watinoda akakwana, muchokwadi. Owen Watkin akaita mushe mushe achipesana neFrance, uye mutambi ane tarenda asi nhamba dzatinadzo, zvirinani. Tinoda maoko ese padhesiki kuti tibude mumutambo uyu. ” tinouya kazhinji kazhinji, ”akadaro Jenkins. “Ndinofunga dzimwe nguva, kunyangwe gumbo rako rakarembera, unofanirwa kurisunga wega kuti uzviwanire zvakanaka.”Akatyora pfupa muruoko rwake achipesana neGeorgia uye ndokukuvadza fudzi rake kurwisa Uruguay, ndosaka aive nekupenya kwakashata muziso rake paakanzi ari kunzwa “99% kukwana”. Sezvakataurwa naJenkins, hapana nzira iyo maPaki ari kushaya izvi. “Hazviwanzo kuita kuti utambe mu semi-fainari yeNdebe yeNyika.” Michael Cheika akabatana nekutamira kuchikwata cheFrench Top 14 kirabhu Montpellier Verenga zvimwe
Asi anoda Davies ipapo ipapo naye. “Akakosha chose kuWales. Iye mutungamiri akanaka mukati merutivi, mukurwisa iye ane izwi rakanaka, gehena rekukwikwidza, uye iye nzira yekuruboshwe-tsoka yekurova.Asi kuzvidzivirira ndizvo zvaanozivikanwa nazvo, achiverenga mitambo uye akagadzira zvakawanda zvakakosha.
“Owen Watkin akasimuka chaizvo, mukomana mudiki uye ane ramangwana rakakura asi Foxy anga aripo nguva yakati rebei uye ndinomuziva zvishoma zvirinani nekuti ndakambotamba naye padanho rekirabhu uye kuno kuWales. ”
Parkes akaedza kutaura chinhu chakarurama,” ani nani anotamba gumi nematatu achaita basa rakanakisa. ”Asi chokwadi ndechekuti Wales yose inoda kuti Davies adzokere panhabvu iya yepakati.Vachamuda kuti asangane nevatambi veSouth Africa ivavo. “Vapambi vese vari vaviri vakasarudzika, Willie Le Roux anga aripo padhuze, tinoziva matarenda ake, nzvimbo mbiri idzi dzakaomarara, dzakananga uyezve wawana Handre Pollard naFaf de Klerk vese vari vatambi vakatanhamara. Uye izvo zvisati zvaitika usati wasvika kurongedza kwavo. ”
Uye munhu wese anoziva zvekutarisira kubva kwavari. Kunyangwe Muchinda Charles.